म नै समकालिन विश्वको १ नंबर नेता हुँ: प्रधानमन्त्री केपी ओलि
August 9, 2020 by साहारा संदेश
विश्वमा कम्युनिष्टको नेतृत्व कमजोर भइरहेको बेला नेपालमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा दक्षिण एशियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्न सफल भएको छ । यती मात्र हैन, विश्वका कम्युनिष्ट सिद्धान्तका प्रतिपादक कार्ल मार्क्स र लेनिनपछि संसारकै सफल राजनेता बन्न सफल हुनुभएको छ केपी ओली ।
त्यसैले संसारकै आकर्षणको केन्द्रविन्दु बन्नुभएका राजनेता केपी ओलीलाई असफल बनाई नेकपाको भविष्यलाई अन्धकारको यात्रामा डोहोर्याउने कुचेष्ठा ग्याङ अफ फोर नेतृत्वले नगर्नुस् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को युवा संगठनका नेता बाबु छत्कुलीले एक अनलाईन मार्फत् व्यक्त गरेको विचार हो यो ।
सामाजिक सञ्जालमा उनको यो विचार पढेपछि नेकपाकै स्थायी कमिटीका एक नेताले सुनाएको एउटा प्रशंग गजबकै छ । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर केही समय अघि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटनमन्त्री योग भट्टराईसँग लामो भलाकुसारी गरेछन् ।
सरकारका गतिविधि, पार्टीका काम, नेतृत्व र त्यसले निभाईरहेका भूमिकाहरुको लामो व्याख्या ओलीले सो भेटमा गरेका रहेछन् । सो भेटमा भएका कुरा मन्त्रीद्वयले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समेत सुनाएछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुसँग भनेका कुरा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुनेपछि उनी पनि दंग परेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएको विषय प्रशंगलाई मन्त्रीद्वयले अन्य केन्द्रीय नेताहरुसँग पनि शेयर गरेका रहेछन् । नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद, सरकारको आलोचना र प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग भईरहेका बेला प्रधानमन्त्रील सवैलाई आश्चार्यमा पार्ने तर्क दिएका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीको तर्क रहेछ समकालिन विश्वमा म नै एक नम्बरको नेता हूँ ।
उनले आफ्नो तर्कको व्याख्या समेत गरेका रहेछन् तपाईंहरु अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा गर्नुहोला । ट्रम्प कहाँ नेता हुनु र ? उनी त व्यापारी । केही समय अघिसम्म नर्तकीहरुलाई नचाएर मनोरञ्जन लिंदै हिड्थे । उनको राजनीतिक इतिहास मेरो जस्तो कहाँ छ र ? न त राजनीति गर्ने विचार र तरिका नै छ । म सँग उनको तुलना हुनै सक्दैन ।
ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको बारे बताएपछि फेरि व्याख्या गरेछन् चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङको । सिले कहिल्यै पनि अभाव झेल्नु परेन । उनी आफ्ना सरकारी उच्च ओहोदाका छोराका बाबु राम्रो पढे, लेखे, खाए, हुर्किए । राजनीतिमा पछि आए । उनको राजनीतिक इतिहास मेरो जस्तो कहाँ छ र रु अहिले पनि उनले बनिबनाउ चीनलाई ठूलो नेतृत्व पंक्तिको सहयोगमा अघि बढाईरहेका छन् ।
मैले जस्तो चुनौतिको सामना गरेर नयाँ विचार र नेतृत्व दिन सकेका छैनन्ओ लीले भट्टराई र भुसाललाई सुनाउँदै गएछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूकिन सबै भन्दा अब्बल हो भन्ने कुरा समेत सुनाउने गरेका छन् । उनको व्याख्या र युवा संघका नेता छत्कुल्लीको व्याख्यामा मिलन विन्दु भेटिन्छ ।
सानै उमेरदेखि राजनीतिमा होमिएको, गरिव जनताको पक्षमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा होमिएको, लामो जेल जीवन बिताएको, पछिल्लो चरणमा आफ्नै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई विजयी बनाएर विश्वमा कहीँ नभएका बेला नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर सरकार बनाएको ।
कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई स्थापित गराउँदै विश्वलाई नै उदाहरण हुनेगरी सरकार चलाएको लगायतका तर्क दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अब्बलपन प्रस्तुत गरेका थिए ।https://samachardainik.com/ बाट साभार गरिएको ।
Prevकाठमाडौँको गोंगबुमा टुक्रा-टुक्रा पारेर बाकसमा राखेर शव फालिएको अवस्थामा फेला
Nextमहाबिर पुनले गरे बिजुलिबाट चल्ने मोटरसाइकलको उद्घाटन: नेपाल प्रगतिपथमा लम्कँदै